Manchester United ayaa hogaanka u qabatay Premier League ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen Burnley garoonka Turf Moor markii Red Devils ay fariin u dirtay kooxda heysata Premier League ee Liverpool kulankii ka dhacay Anfield Axadii.
Red Devils ayaa seddex dhibcood ka qaadatay hogaanka Premier League iyadoo xilli ciyaareedku sii dhawaanayo markii ugu horeysay tan iyo markii uu ku guuleystay horyaalkii 2012-13 isla markaana uu isla kulankaas ku garaacay Liverpool. . Labada dhinac ayaa kulmi doona Axada kulan muddo dheer la sugayay oo ka dhacaya Anfield.
Goolkii macaanaa ee uu dhaliyay Paul Pogba bartamihii qeybta labaad ayaa Man United u horseeday hogaanka horyaalka Premier League, iyadoo Pogba uu xaqiiqsaday halkudhigiisa POGBOOM markii uu dhaliyay gool fantastik ah isla markaana si aan caadi aheyn ula dabaal degay Bailly.
Jawiga ciyaarta ayaa ahaa mid aad u kacsan intii lagu jiray qeybtii hore ee ciyaarta iyadoo muuqaalka uu ahaa kaaliyaha garsoore VAR oo noqday midka loogu hadalheynta badan yahay kadib markii ay gaareen seddex go’aan oo muran dhaliyay.
Luke Shaw ayaa nasiib ku lahaa inaan casaan la siin qeybtii hore ee ciyaarta kadib qalad uu ku galay Gudmundsson halka Robbie Brady uu ka badbaaday kaarka casaanka kadib qalad uu ku galay Cavani.
Kadib afar daqiiqo oo VAR ah oo la fiiriyey labada dhacdo ee isku xira, garsoore Kevin Friend ayaa go’aansaday inuu Shaw siiyo kaarka hurdiga ah halkii uu kaarka hurdiga u siin lahaa Brady.
Kahor dhamaadka qeybtii hore, VAR ayaa sidoo kale beeniyay madax kahadal kabtan Harry Maguire markii uu qalad ku galay Pieters markii uu kasoo horjeeday madaxa.
Qeybtii hore ayaa kusoo idlaatay goolal la’aan.
Intii lagu jiray qeybtii labaad, Manchester United ayaa la soo wareegtay gacan ku heyn xoog leh iyo xakameyn ciyaarta, iyadoo goolal is xigxigay laga dhaliyay Burnley laakiin kooxda martida loo ahaa ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay iyagoo si adag u difaacay, gaar ahaan goolhayaha.
Ugu dambeyntiina darbigii Burnley ayaa jabay daqiiqadii 70-aad markii Paul Pogba uu hogaanka u dhiibay Manchester United.
Rashford ayaa kubbada ka qaaday Paul Pogba oo ka ciyaara garabka midig wuxuuna kubbada ku tuuray goolka Burnley. Waxay ahayd yool aad u qurux badan oo indhaha soo jiita.
Daqiiqadihii ugu dambeeyay, United ayaa dib ugulaabatay Burnley dhowr dhibic oo udhow Manchester United iyagoo raadinaya goolka barbaraha, xitaa Manchester United cabsi xoogan ayeey qabatay daqiiqadii 88aad kubadii ka difaacaysay Maguire xusulka, laakiin VAR ayaa furmay wuxuuna noqday mid aan aheyn rigoore.
Ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday Manchester United oo ka badisay Burnley si ay seddex dhibcood ugu qabato hogaanka Premier League.
axadle 5965 posts
the tip of the election marketing campaign, the applicants